गोर्खालीहरुको राज्य फिर्ती शनिवार, असार २०, २०७७
‘सम्झनामा उनी’ शनिवार, असार २०, २०७७
विकासको असारे मोडेल र सुशासनको सन्दर्भ बिहिवार, असार १८, २०७७
लघुकथा : तोरीको तेल खाने राँगो थापा साब’लाई यसपालीको डनलप कत्तिको फाप्ने हो, पोर साल त राम्रै आम्दानी गर्नु भा थियो । फेरी बैदार साबको सानो स्वरमा तर्क सुनिन्छ । आइतवार, असार १४, २०७७
२० वर्षका १० सम्पादक स्मरणहोस्: समाचारपत्रको जिम्मेवारीबाट अलग भएर जाँदा पनि कामना प्रकाशन प्रालीको सोल्टीमोडस्थित कार्यालयमा पुस्करलाल सरले भनेको अझै यादछ ‘कमलजी हजुर जस्तो निडर र सक्षम पत्रकारको खाँचो छ नेपालमा । पत्रकारितामा निरन्तर रहिरहनु ।’ पुस्करलाल सर स्वर्गबास भैसक्नु भो । तर उहाँको यहि भनाई आत्मसाथ गर्दै अहिलेसम्म पत्रकारिता चलिरहेको छ । चलिरहनेछ । शनिवार, असार १३, २०७७
शिक्षालाई यसरी सुचारु गर्ने कि ? विद्यालयमा हरेक विद्यार्थीहरुलाई हरेक दिन बोलाउनुको सट्टा हरेक हप्ता एउटा विद्यार्थी तीन दिन जस्तो आउने गरी दूरी कायम गर्दै पठनपाठनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । विश्वको अनुभवले सिद्ध गरेको छ कि बालबालिका कोरोनाको वाहक हुन सक्छ तर, शिकार हुन सक्दैन । बिहिवार, असार ११, २०७७
प्रदेशको ‘ललिपप’ विश्वविद्यालय स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्माण भएका खजुराका थुप्रै योजना असफल भइसकेका छन् । चारले सडक अलपत्र छ । ग्रिनसिटी पत्तासाप भैसक्यो । सभाहल निर्माणमै चलखेल बढेको छ । अन्य योजना त्यस्तै छन् । यहाँका नेताहरूलाई आफनै प्रचारबाजी गर्न र कमाउँ धन्दामै फुर्सद छैन् । यस्तो कुसंग्राममा प्रदेश सरकारले बाँडेको ‘ललिपप’को अहिलेको मिठास स्वाद कायम गरिराख्न गाह्रो देखिएको छ । बुधवार, असार १०, २०७७
नेपाल र भारत : रोटीबेटीको सम्बन्ध ईतिहासदेखि वर्तमानसम्म यस्ता बैवाहिक सम्बन्धहरुले दुई देशबिचको मित्रताको एउटा दरिलो पाटोलाई दर्साउँछ । हुनत दुबै आआफ्नो स्थानमा सार्वभौमिकता सम्पन्न राष्ट्रहरु हुन्, तर, पनि यस्ता दुईतर्फी नातागोता गाँस्ने चलनले मित्रताको सुखद् अनुभुती पक्कै गराउँछ । आज पक्कै पनि यसै प्रकारको नातागोता लाउने गरी बनाईएको मित्रताले गर्दा पनि होला सानो ठुलो मतभेद हुँदा पनि हाम्रो द्विदेशिय सम्बन्धको जग हल्लिएको छैन । एकप्रकारको अन्य देशहरुभन्दा भिन्नको प्रगाढ सम्बन्ध नेपाल–भारतबिच बनेको छ । हामी दुई देशबिच को यी र यस्ता कतिपय सामाजिक धार्मिक अनि रितीरिवाजहरुको सामिपत्यालाई सानो हृदय बनाएर बुझ्न सकिन्न । मगलवार, असार ९, २०७७
लघुकथा : कालो चुक यहाँ के गर्ने भन्ने कुरोमा पनि आफुले नै पहिले गरी राखेको कुरालाई ब्यवस्थित रुपमा ब्यवसायिक तरिकाले अघी बढाउन सके पुगी हाल्यो नि । देश पनि आत्म निर्भर हुने, आफुलाई पनि स्वरोजगारले टेवा पुर्याउने । आइतवार, असार ७, २०७७
भर्चुअल कक्षाको औचित्य कति ? सरकारले बैकल्पीक शिक्षा निर्देशिका २०७७ जारी गरेर बैकल्पीक सिकाई पद्धतीको गाईडलाईन अनुसार स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई अभिमुखिकरण गर्ने र यसलाई स्थानीय तह सम्म नै पुर्याउने लक्ष्य यस पद्धतिले लिएको छ । तर, कति प्रतिशत बिद्यार्थी यी माध्यमको पहूँचमा छन् ? कर्णालीको प्रशंग जोड्ने हो भने बिद्युतको पहूँच २७ प्रतिशत जनता संगमात्र छ । आइतवार, असार ७, २०७७
लघुकथा : देउराली मोमोज सेन्टर अनुहार कुनै तरिकाले हिन्दी बोल्ला जस्तो नदेखिने, रण बहादुर, गोमा र छोरो गगनले फरर, लिजिए सर आपका मोमोज तयार है, और कुछ चाहिए, भनेको सुन्दा अचम्मै लाग्न सक्छ । शुक्रवार, असार ५, २०७७
बाँकेमा नयाँ सिडिओको धङ्धङी उपमेयर थापाले लेखेकी छन् ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा बाँके जिल्ला आउनु भएका सिडिओ राम बहादुर कुरुम्वाङ्ग ज्युलाई जिल्लामा स्वागत गर्दै मेरो अनुरोध छ, लकडाउनले सर्वसाधारण थला परेको अबको अवस्थामा लकडाउन या निषेधाज्ञा कोरोनासंग लड्ने अश्त्र होईन । मगलवार, जेठ २७, २०७७
लकडाउन समस्या की समाधान ! ‘लकडाउन सुरुभएदेखि घरमै बसिरहने भनेका दैनिक कामगरी खाने बर्ग, मजदूर, साना खुद्रा पसले, साना अन्य ब्यावसायीहरु, यात्रुबहाक गाडीहरु र तिनमा काम गर्ने बर्ग, बिद्यार्थी बर्ग घरमै बस्न बाध्य पारियो । यसले गर्दा कामगरी खाने बर्ग भोकले मर्नु पर्यो । आत्म हत्याका घटना भए । घरमा बस्दा मानिसहरुले धेरै समस्याहरु खेप्नु पर्यो । उनीहरुको तलव पनि भएन , साहूले पत्याउँदैन र घरमा भएको खाद्यान्न पनि सकिंदै गयो । सरकारले दिएको राहत हात्तीको मुखमा जीरा भयो । यसले गर्दा यस देशमा समस्या दिन प्रतिदिन थपिंदै गयो ।’ मगलवार, जेठ २७, २०७७
सतलजसम्म पुगेको गोर्खाली सेना अनि काँगडा युद्ध ईस १८०३ मा गोर्खाली फौजले गढवालमा आक्रमण गर्यो, लँगुरगढको लडाईमा गोर्खालीहरुले बडो वीरताका साथ गढवाली फौजलाई परास्त गर्यो, सेनाको नेतृत्व श्री अमरसिँह थापा, चौतरिया हस्ति दल शाह, चौतरिया बम शाह, रणजोर थापाले गरेका थिए भने यो सेनाको तुकडीले बडोरण कौशलको प्रदर्शन पनि गरेको थियो । सोमवार, जेठ २६, २०७७
नेता, गणतन्त्र र हाम्रो गन्तव्य गणतन्त्र भनेको जनताहरुको इच्छा र आवश्यकता अनुसार चल्ने राजनीतिक शासन ब्यवस्था हो । तथापि हामीले ल्याएको गणतन्त्र ऋषि धमलाको जनता जान्न चाहान्छन भन्ने कार्यक्रम जस्तै भयो । कुराभरि आफ्ना, नाम मात्र जनताको । काम आफ्नो मनभरि गुम्सिएका कुण्ठा र इष्र्यालाई साम्य पार्नका लागि गर्ने, कुराभरि जनताका भावनाअनुसार गरेको भनेर दावी गर्ने । आइतवार, जेठ २५, २०७७
सीकाई सहजीकरण निर्देशिकाको सान्दर्भिकता ‘अन्ततः अहिलेपनि नागरिक समाजले महत्वका साथ हेरिदैँ आएको एसईइ लगायत कलेज र सिटीइभिटी तर्फका परीक्षाहरु स्थगित । सरकारको नूनपानी खाएको नाताले विज्ञप्तीको पालना गर्नु मेरो जिम्मेवारी । अन्तरमन भने विद्यार्थीहरुलाई यसरी धोका दिनु हुदैनथ्यो भन्नेतर्फ उन्मुख । त्यतिबेलासम्म नेपालमा चाइनाबाट घर फर्केको एकजना एक्तीस बर्षे नेपालीमा मात्र कोरोना सङ्क्रमित भएको पुष्टि । यसरी चैत्र ६ गतेबाट बन्द भएका शिक्षणसंस्थाहरु अहिलेसम्म पनि यथावत ।’ शनिवार, जेठ २४, २०७७